> Resource > Ladnaansho > Tutorial qashinka Mac tirtiray Picture Recovery
Sida loo soo ceshano Photos tirtiray ka Trash Mac?
Qaar ka mid ah sawirada aan waxtar lahayn ayaan tirtiray ka desktop Mac, ka dibna waxaan ka bariyeelay qashinka. Marka mar kale waan hubiyaa aan desktop, waxaan ogaaday images badan oo qiimo leh ayaa la tirtiray aad. Waxaan doonayaa in aan ogaado waa waxaa suurto gal inuu dib u helo sawiro aan?
Jawaabtu waa haa gabi ahaanba. Xitaa haddii photos ayaa weelna qashinka Mac, weli iyaga ku soo celin karaa. Tani waa sababta oo ah in ay sawiro la tirtiro weli ka jiraan on your drive Mac adag, in kastoo weliba aad heli karin. Sidaas, waxaad u baahan tahay in ay qaado tallaabo degdeg ah si aad u hesho barnaamijka sawir Mac qashin tirtiro si ay u soo ceshano sawiradaada.
Iyadoo Wondershare Data Recovery for Mac , ma jirto baahi loo qabo in aad walwasho ku saabsan arrinta soo gaartay sawirkan. Waxa uu barnaamijkaaga u qashinka tirtiray kabashada sawir Mac si fiican loogu talagalay waa ay awoodaan in ay dib u soo ceshano tiro aad u badan oo ah noocyada image, oo ay ku jiraan JPG, TIFF (TIF), PNG, BMP, GIF, PSD, CRW, CR2, iwm
Download version maxkamadda hadda. Version maxkamad Arintan waxay u sahlaysaa in aad baarista xijaab Mac sawiro laga badiyay, iyo sawiro laga helay ayaa diyaar u ah kulanka xiisaha leh ka hor intaadan go'aansan inuu ka soo kabsado iyaga.
Samaynta qashinka tirtiray Picture Recovery Mac 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Select Recovery Mode inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Trash Mac
Sida aad ka arki kartaa image hoos ku qoran, adiga kugu saabsan si ay u akhri tilmaamaha si taxadar leh oo ay doortaan hab soo kabasho ee interface bilaabatay si ay u bilaabaan soo kabashada yihiin.
Si aad u soo kabsado sawirada tirtiray ka qashinka Mac, fadlan dooro "lumay Recovery File" mode.
Tallaabada 2 Scan Mac Trash in Raadi Khasaaray Photos
Qalab muujin doonaa oo dhan qoruhu ama muda aad Mac, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah in aad qashinka Mac caasimadii in guji "Scan" si ay u bilaabaan iskaanka. Waxa kale oo aad dooran kartaa Risaalo meesha photos lumay ayaa laga badiyay ka si aad u iskaan.
Si aad u soo ceshano photos, fadlan dooro "Image" marka gujinaya "Nooca File Dooro" furmo.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh oo ka Trash Mac Ladnaansho tirtiray Sawiro
Sawirrada laga helay Risaalo la marsiiyey oo dhan lagu soo bandhigi doonaa fayl. Halkan waxaad riixi kartaa "Trash" folder in ay ku eegaan iyo hubi sawiro aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado.
Markaas fadlan dooro sawiro aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u soo celin aad Mac badbaadiyo.
Fiiro Gaar ah: Waxa fiican in la soo celiyo ee photos recoverable in ay xijaab kale ee aad Mac si looga fogaado sawiro ka overwritten.
Macbook Air Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Macbook Air